BANKY FOIBEN’I MADAGASIKARA : Orinasa 16 no vita fifanarahana hamatsy ny tahirim-bolamena
Orinasa 16 tamin’ireo 20 namaly ny tolotra nataon’ny banky foiben’i Madagasikara no nanasonia fifanarahana hamatsy ny tahirim-bolamena. 2 novembre 2020
Tontosa ny zoma teo ny fifanaovan-tsonia teo amin’ny roa tonta mikasika izany. Ireo orinasa ireo izany no hiantoka ny fampiakarana ny tahirim-bolamena eo anivon’ny banky foibe. Dingana izay andrandraina hanatsara ny fahasalaman’ny sandam-bola malagasy manoloana ireo vola vahiny.
Tato anatin’ny 30 taona farany, tsy nitsahatra nitombo ny vidin’ny volamena miohatra amin’ny sandam-bola vahiny. Ankilan’izay, ny fiatrehana ny zava-misy eo amin’ny tontolon’ny fifandraisana iraisam-pirenena ankehitriny. Ohatra amin’izany ny ady ara-barotra misy eo amin’ireo Firenena matanjaka toa an’i Etazonia sy Chine, ny fialan’i Royaumes-Unis ao amin’ny vondrona Eoropeana ary indrindra manoloana ny takaitra navelan’ny valanaretina Covid-19 eo amin’ny toekaren’izao tontolo izao.
Dingana ahafahana mametraka rafitra ara-dalàna amin’ny fanondranana volamena ihany koa ny fisian’ny fifanarahana amin’ireto mpandraharaha ireto. Raha ny zava-nisy teo aloha dia ny tsenan’ireo voly fanondrana toy ny lavanila, cacao ary jirofo ihany no tena miantoka fampidirana vola vahiny betsaka ho an’i Madagasikara. Vokatra andrasana aorian’izao ihany koa ny hahafahana manatsara ny mizanam-pandoavana amin’ny alalan’ny vola vahiny miditra amin’ny fanondranana volamena ary indrindra ny fahamarinan-toeran’ny Ariary manoloana ny vola vahiny.
Ity fifanarahana miaraka amin’ny mpandraharaha ity izay tafiditra amin’ny fanatanterahana ny veliranon’ny Filoham-pirenena amin’ny fametrahana ny seha-pihariana volamena ho fototra lehibe amin’ny fampandrosoana ny toekarem-pirenena. Dingana lehibe amin’ny fametrahana ny tahirim-bola eo anivon’ny banky foibe araka izany ny fahavitan’ity fifarahana teo amin’ny Fitondram-panjakana sy ireo mpandraharaha eto an-toerana ity.
Tovolahy 18 taona nanolana an-jandriny vavy 06 taona voasambotra ANATIHAZO-ISOTRY (366) 25 janvier 2021 Ho azo tanterahina eto Madagasikara ny fandidiana famindrana voa FIANGONANA SY NY FANJAKANA (98) 25 janvier 2021 Niakatra 442 ny marary vaovao, 06 ny namoy ny ainy FIVOARAN’NY COVID-19 (90) 25 janvier 2021 Mikatsaka ny fampidinana ny vidin-jiro sy rano eto Madagasikara FILOHA ANDRY RAJOELINA (73) 25 janvier 2021 Mpanendaka miisa 06 sy mpifoka rongony roa saron’ny Polisy ASAN-JIOLAHY ETO AN-DRENIVOHITRA (62) 25 janvier 2021 Tonga ireo fitaovana vaventy fanaovan-dalana FANOMEZANA FAHALEOVAN-TENA NY FARITRA (55) 25 janvier 2021